Musa ukuxhaswa ngumntu owaye waba ngumfundi onjengawe
Unokwenyiswa kakhulu ngabafundisi bakho, okanye unokuba nomdla wokuzihlangabeza kodwa ungazi ukuba ungathini kuqala. Kubalulekile ukuba ukhumbule, nangona kunjalo, ukuba ininzi profesensi ngabafundisi bootitshala kuba bathanda ukufunda nokusebenzisana nabafundi beekholeji. Ukwazi ukuba ungazi njani iikholeji zakho zasekholejini kunokuphela kokuba enye yezakhono ezivuyisayo ozifunda ngexesha lakho esikolweni.
Yiya kwiklasi nganye imihla
Abafundi abaninzi banqabile ukubaluleka kwesi.
Enyanisweni, kwiholo yokufundisa yabafundi abangama-500, unjingalwazi wakho akayi kubona ukuba awukho. Kodwa ukuba ukhona, ubuso bakho buya kuqhelana ukuba unokwenza ukuba uqaphele kancane.
Jikela kwiSabelo sakho kwixesha
Awufuni ukuba uprofesa wakho akuqaphele ngenxa yokuba uhlala ucela izandiso kwaye ujika izinto emva kwexesha. Enyanisweni, uya kukwazi, kodwa mhlawumbi kungekho ngendlela ofuna ngayo.
Buza Imibuzo uze Uhlanganyele kwingxoxo yeklasi
Le nto ingaba yindlela elula yokuba uprofesa wakho azi igama lakho, ubuso kunye negama. Ngokuqinisekileyo, buza imibuzo kuphela ukuba unombuzo osemthethweni (ngokumalunga nokucela omnye nje ngenxa yokucela) kwaye uncedise ukuba unento yokuthetha. Noko ke, kunokwenzeka ukuba unayo ininzi yokongeza kwiklasi kwaye unokusebenzisa oko kukunceda.
Yiya kwiiHhovisi zeeHhovisi zeeHhovisi
Yeka ukucela uncedo ngomsebenzi wakho wasekhaya. Yeka ukucela icebiso kwiphepha lakho lophando.
Yeka ukubuza umbono wakho ngoprofesa malunga nolunye uphando owenzayo, okanye kwincwadi ayithetha ngayo ngokubhala. Yeka ukumema kumbongo wakho slam ngesonto elizayo. Ngelixa uqala ukucinga ukuba akukho nto inokuthetha ngayo noprofesa malunga, kukho, eneneni, izinto ezininzi onokuxoxa ngazo kunye nabafundi bakho .
Kwaye ukuba nencoko yodwa ngomnye mhlawumbi yindlela efanelekileyo yokuqala ukwakha uxhumano!
Bona uNjingalwazi wakho uthetha
Yiya kwisiganeko apho uprofesa wakho uthetha khona, okanye kwintlanganiso yeqela okanye inhlangano yakho inzululwazi icebisa.Iprofesa yakho inokubandakanyeka kwizinto kwi campus ngaphandle kweklasi yakho kuphela. Hamba uyiva okanye isifundo sakhe kwaye uhlale emva koko ukuba ubuze umbuzo okanye ubabonge ngenkulumo.
Cela ukuba Uhlale Ngomnye weeKlasi zeNjingalwazi zakho
Ukuba uzama ukumazi uprofesa wakho - ithuba lokuphanda , ukucebisa, okanye nje ngokuba ubonakala ebandakanyeka - mhlawumbi unomdla kwizinto ezifanayo. Ukuba bafundisa ezinye iiklasi onokufuna ukuthatha, buza inzululwazi yakho ukuba unako ukuhlala kwelinye lale semester. Kuya kubonisa umdla wakho kwintsimi; Ukongezelela, ngokuqinisekileyo kuya kubakho kwincoko malunga nokuba kutheni unomdla eklasini, zeziphi iinjongo zakho zezifundo xa usesikolweni, kwaye unomdla ntoni kwisihloko kuqala.